Na nwube na nhazi nke oge a na ụlọ ndị dị n'obodo ukwu na ụlọ, a na-ejikarị ọnụ ọgụgụ ndị na-arụ mmanya eme ihe. Ihe mmewere nke ime a abanyela n'ime ihe ndi ozo. Iji ogwe dị n'ime ime ụlọ ahụ kama ịnọ na nkebi ahụ bụ ọrụ ma mara mma.
Ogwe maka ụlọ maka ime ụlọ
Mgbe ị na-emepụta na ịmepụta ụlọ ndị mmadụ, ụlọ mmanya ahụ bụ isi maka ihe dị mma. N'ụlọ buru ibu, nkewa dị n'etiti kichin na ebe obibi ahụ na-arụ ọrụ atụmatụ - nkewa nke oghere n'ime mpaghara abụọ, nke otu nzube dị n'otu. Maka obere ụlọ, ihe nkwụnye mmanya bụ nhọrọ magburu onwe ya maka mkpebe ọnụ ụlọ dị ndụ jikọtara ya na kichin na ọrụ dị mkpa. Na niches n'okpuru mgbochi ọ dị mfe iji chekwaa ụlọ ọrụ, a ga-eji okpokoro elu dị ka mgbakwunye elu ọrụ na tebụl nri maka obere ezinụlọ.
Ọdịdị nke mgbidi dị n'ụdị nke ụlọ mmanya
E nwere ike ịmepụta ihe ndị dị na osisi - osisi, ihe okike ma ọ bụ artificial, plastaboard, metal or plastic. Dabere na nzube bụ isi na kichin na ụlọ dị n'ime ụlọ, nkebi ahụ nwere ike ịbụ nhazi dị mfe n'ụdị elu obosara n'elu, a pụkwara ịgbakwunye ya na ihe ọkụ, ọkụ, shelf na ihe ndị yiri iko.
Uche ndị na-emepụta ihe dị iche iche
Nhazi nke oge a na ikike imepụta ya na-eme ka o kwe omume ịghọta ihe ọ bụla, ọbụna echiche ndị kachasị dị egwu maka ịmepụta ime ihe pụrụ iche ma dị jụụ. Akụrụngwa, imewe, ejiji ọkụ, atụmatụ nke agba ma na-emecha dabere na ụdị nke ụlọ ahụ.
Maka ime n'ime ụdị ejiji, bụ nke a na-ewu ewu ugbu a na ndị na-eto eto, ndị na-eto eto na ndị na-eto eto na-arụ ọrụ n'ụgbọ mmiri, dịka osisi. Site na imepụta a, ọ dị ezigbo mkpa ịṅa ntị n'ebe ndị ọzọ na-enye ìhè dị kpọmkwem n'elu nkebi.
N'ụlọ na ụlọ obibi, mma na imewe na eco-style na ihe ndị dị ndụ dị nnọọ mma. Ogwe ntụ ọka nke osisi ma ọ bụ nkume nkịtị bụ ihe dị mma, mara mma, mara mma ma sie ike.
Ogwe ntụ ọka nke a na-eme na iko bụ otu ihe dị iche iche na-ewu ewu ma na-ewu ewu nke dị mma n'ime ime. Nke a n'ime ime dị n'ime ya na-abawanye n'ime ma nnukwu ụlọ.
Ụlọọrụ Kọmputa White
Kedu ka esi eme ụlọ n'elu ime ụlọ ịwụ?
Ngwongwo na-etinye ntancha
Awara osisi maka steepụ
Mmiri na mba na aka aka ha
Igbe nke ndị na-ese ihe na aka aka
A na-eji ajị anụ mee ihe
Kedu otu esi eji aka aka gị melite otu ihe eji aka ochie?
Eji mpempe akwụkwọ nke PVC
Jiri aka aka gị na-egwu ọnụ ụzọ
Cystitis na mmalite ime
Angelina Jolie kwuru banyere ịgba alụkwaghịm site n'aka Brad Pitt
Uwe mkpu uwe si na aji aji
Ụwa ime mmụọ nke mmadụ
Azu na mgwakota agwa
Ụzọ 10 Ngwọta Ọrịa Na-adịkarị n'Aka Mmadụ
Home cherry mmanya - uzommeputa
Ọdịdị nke Al Pacino dị oke ụda na-enyo
Ụbọchị Igor Igor
Haemostatic herbs na uterine ọbara ọgbụgba - Ezi ntụziaka
Chicken ara na foil na oven
Chicken imeju na mushrooms
Lymphogranulomatosis bụ ọrịa cancer ma ọ bụ na ọ bụghị?
Akpa iko maka ebe ịsa ahụ
Mkpụrụ nke tomato osisi na-epulite na griin haus
Kedu calorie ole na carrots?
Bathroom racks na igwe anaghị agba nchara
Mgbu na ikpere - akpata
Egwuregwu Didactic "Oge"